जब तपाईं युरोप यात्रा योजना, तपाईं संग धेरै विकल्पहरू सामना गर्दै हुनुहुन्छ! अनन्त स्थानहरू र अनुभव, that you could travel for years and still feel like you’ve missed something essential. This can lead to making the mistake of over-committing, र बनाउन साना विवरण बाहिर हराइरहेको यात्रा र रेल यात्रा त जादुई. हामी युरोप यात्रा योजना तपाईं के तपाईं हुँदैन र कसरी बताउन यहाँ हुनुहुन्छ, समाप्त गर्न सुरु देखि!
तपाईं प्रामाणिक स्पेनिश तपस अनुभव गर्नु अघि, piazzas रोम वा छत terraces मा प्राग, व्यवस्थापक को एक महत्वपूर्ण बिट आवश्यक छ! बस राख्न, तपाईं युरोप यात्रा योजना जब थप तपाईं तयार, रमाइलो र तनाव मुक्त यात्रा को ठूलो आफ्नो संभावना तपाईँको आशा सम्म बसोबास.
त्यसैले यहाँ बचत तालिम सुझाव: छनौट एक शीर्ष पाँच, कि युरोपेली साहसिक लागि हुनुपर्छ विचाराधिनगर्नुपर्नेकार्य! शायद it&#8217;s पिउने मा Hofbrauhaus मा म्यूनिख, वा एक नहर भ्रमण लिनुको एम्स्टर्डम, वा दाऊदले-बाट धेरै कोण केलाउँदा – फ्लोरेन्स. जो यो छ, ती तल चिनो र तिनीहरूलाई वरिपरि आफ्नो यात्रा योजना. रेल द्वारा बेहतर.
अब हामी युरोप यात्रा योजना चाहिन्छ भनेर स्थापित गर्नुभएको, अर्को आफ्नो शीर्ष गन्तव्यहरू छनौट गरिएको छ. YOLO आत्मा मा, तपाईं कुटपिट ट्रयाक बन्द जाने र खोजी गर्न सक्नुहुन्छ लुकेका रत्न को शहर भित्र. तर चाहन्छ भनेर मा HIPSTER को मुख्यधारा गन्तव्यहरू विरुद्ध जान, बस्नुहोस गर्न सक्नुहुन्छ. एक पर्यटक बस मा. किन जस्तै ठाउँमा एउटा कारण त्यहाँ the Colosseum, एफिल टावर, र चार्ल्स ब्रिज are all अत्यन्तै लोकप्रिय पर्यटकहरु संग: तिनीहरूले उत्कृष्ट हुनुहुन्छ! महसुस गर्नु हुँदैन तपाईले पाउनु पर्छ पिटेको मार्ग बाट केवल यसको लागि. ठूलो यदि आकर्षण तपाईं अपिल, त्यसपछि जाने र तिनीहरूलाई देख्न.
एउटै टोकन द्वारा, सुसमाचार रूपमा मार्ग देखाउने पूस्तक व्यवहार छैन. यो Louvre पूर्ण एक मा पर्छ-के छ भन्न सक्छ पेरिस यात्रा, but maybe you’d haveabetter day searching for Blek Le मुसा pieces on alley walls. लचकता, जब तपाईं यात्रा, महत्वपूर्ण छ, सधैं!
सुझाव 3: Travel dates are crucial when you planatrip to Europe
सुझाव 4: Assemble your travel documents is part of planajourney to Europe
अघि उल्लेख रूपमा, यो भन्दा बढी प्रतिबद्ध र धेरै मा निचोड प्रयास गर्न सजिलो छ. यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्ने हो. आफ्नो बहुमूल्य बिदा राम्रो उपयोग गर्न आवश्यक, त्यसैले यसलाई युरोप यात्रा योजना बनाउँदा आफ्नो मार्गहरू भन्दा-प्याक प्रयास गर्न सजिलो छ. तथापि, यो महँगो हुन सक्छ (छैन थकित उल्लेख), माथि-पैकिंग पनि केही दिनमा धेरै गन्तव्यका साथ यात्राको बाटोमा थप समय जान्छ रूपमा, र थप ग्याँस वा रेल टिकट. चरम अवस्थामा, यो एक यात्रा दबाउने गर्न सक्नुहुन्छ, होटल चेक इन र जाँच-बहिष्कार को एक कलंक यसलाई खोल्दै (स्थिर पैकिंग र अनप्याक संग), जबकि रेल Windows पछिल्लो एक कहिल्यै-भ्रमण परिदृश्य दौड हेर्दै. यदि सम्भव छ भने, बिस्तारै गर्नुस्. तपाईं गर्नेछौं यातायात मा सुरक्षित र आफ्नो गन्तव्य अन्वेषण गर्न थप समय पाउन.
यात्री आफ्नो बैंक पैसा खरीद यूरो को धेरै बर्बाद (या बुरा अझै, एक देखि मुद्रा विनिमय काउन्टर) युरोप आइपुगेपछि अघि. यो hefty शुल्क मा परिणाम! so don’t neglect this subject when you planatrip to Europe.
हाम्रो सल्लाह तपाईं युरोप मा आएका बेला एउटा एटीएम सीधा दूर टाउको र आफ्नो एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर नगद झिक्न छ. यसलाई सरल छ, र विनिमय दर भनेर लेनदेन लागि प्राप्त लगभग निश्चित हामी घर बैंकहरू देखि पनि मिल्यो कुनै पनि दर भन्दा राम्रो छ. आफ्नो बैंक कल अन्तर्राष्ट्रिय एटीएम कारोबार शुल्कहरू बारेमा सोध्न जानुअघि, साथै तपाईं विदेश आफ्नो कार्ड प्रयोग गरेर गरिने तिनीहरूलाई जानकारी रूपमा. तपाईंले तिनीहरूलाई नभन्नुहोस् भने, तिनीहरूलाई सोच्न सचेत सक्छ यो ठगी हो, र आफ्नो कार्ड ब्लक हुनेछ. पनि, आफ्नो बैंक छ भने सोध्न अन्तर्राष्ट्रिय स्थानहरू वा भागीदारी संग स्थानिय युरोप मा बैंकहरू.
सुझाव 9: Don’t forget to call your phone carrier before you planajourney to europe
तपाईं पूर्ण युरोप यात्रा योजना गर्न एक पटक आफ्नो वाहक कल र योजना म प्राप्ततपाईं आफ्नो फोन प्रयोग गर्ने योजना च, र त तपाईं आकस्मिक डाटा शुल्क बच्न आफ्नो फोन सेट अप निश्चित (संक्षेपमा: सेलुलर डाटा बन्द र सेलुलर डाटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनुप्रयोगहरू संख्या प्रतिबन्ध). र, एक योजना रूपमा, इमेल डाउनलोड र पठाउनका लागि वाइफाइ नेटवर्क मुक्त लीन, वेब जाँच र प्रयोग अनुप्रयोगहरू. युरोप धेरै वाइफाइ हटस्पट छ, त्यसैले तपाईं लामो समय को लागि स्पर्श बाहिर हुनेछैन. वैकल्पिक, तपाईं युरोप प्राप्त गर्दा आफ्नो फोन लागि सिम कार्ड किन्न.
Eightydays is an awesome travel app that can help you planatrip to Europe while giving travelers an easy look into the options available when युरोप भरि यात्रा.
प्रयोगकर्ता सुरु र समाप्त गर्न शहर उठाएर सुरु (अहिलेको लागी, यसलाई सुरु गर्न र एउटै ठाउँमा यात्रा समाप्त गर्न आवश्यक छ). त्यसपछि प्रस्थान मिति चयन, कसरी लामो यात्रा हुन र कति हुनेछ गन्तव्यहरू समावेश गर्न. तिनीहरूले युरोप मा शहर हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्रयोगकर्ता पनि चयन गर्न सक्नुहुन्छ, युरोपेली संघ वा बस सेन्जेन क्षेत्र. अनुप्रयोगलाई त्यसपछि एक यात्रा सिर्जना गर्नेछ, प्रत्येक शहर मा Airbnb दर संग पूरा, बजेट मा ती लागि.
अनुप्रयोगलाई राम्रो देखिन्छ कि एउटा यात्रा मा stumbles सम्म यो shuffling विकल्पहरू जारी गर्न सम्भव छ. र असुविधाजनक यात्रा चिन्ता छैन: The site says यसलाई विशेष टाढा-टाढा विमानस्थलको बाहिर सामा and early morning departures that can drain travelers on the road.
Travlelers can use को Eightydays वेबसाइट or the newly launched iOS अनुप्रयोग to plan their European voyages.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र सिर्फ एक हामीलाई एक क्रेडिट दिन लिङ्क यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/plan-trip-europe/ - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#bucketlist #HowToGuideEurope europetravel longtrainjourneys रेल सुझावहरू यात्रा traveltips
ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्पेन, ट्रेन यात्रा सल्लाह, ट्रेन यात्रा टर्की, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप